Ikhaya » Izindaba Zamuva » Amahhotela nezindawo zokungcebeleka » Ihhotela Elisha LeBlossom iHouston Livula Iminyango yalo
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Zokunethezeka • emihlanganweni • Izindaba • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
IBlossom Hotel Houston
I-Blossom Hotel Houston, indawo entsha kanokusho yase-Houston, iyakuthokozela ukuvuleka namuhla kubavakashi nomphakathi. Itholakala ku-7118 Bertner Avenue kanye nenkundla yezemidlalo engumakhelwane i-NRG, i-Texas Medical Center nezindawo zokuzijabulisa ezidumile, ihhotela lanamuhla libheke ngabomvu ekwethuleni umphakathi wase-Houston kanye nomphakathi omkhulu ngezinsiza zawo ezisezingeni lomhlaba, izindawo zokudlela ezinhle, nezindawo eziphakeme zemihlangano nezemicimbi.
Ihhotela likanokusho elisha lase-Houston livula ngezinsiza zikanokusho, amagumbi ezivakashi nama-suites, ichibi eliphezu kophahla, kanye nezinhlelo zemiqondo yokudlela eholwa abapheki ababili abanezinkanyezi ze-Michelin.
Ihhotela lethula okunikezwayo kwesikhathi esilinganiselwe ngesikhathi samaholide.
I-Blossom Hotel Houston yaklonyeliswa nge-COVID Hero Award ngokuhlonishwa ngokusekela kwayo umphakathi wendawo phakathi nobhadane nesiphepho sasebusika.
“Kulandela isikhathi esinzima sedolobha lethu kanye nesifundazwe kulezi zinyanga eziyi-18 ezedlule, sikhona IBlossom Hotel Houston bayakujabulela ukwethula le ndawo emphakathini,” kusho u-Albert Ramirez, imenenja jikelele yeBlossom Hotel Houston. "Siyaziqhenya ngokuhlinzeka ngamathuba emisebenzi emphakathini futhi sibambe iqhaza ekuvuseleleni umnotho wendawo ngenkathi sinikeza izivakashi zethu indawo yokuhlala ephambili kodwa enethezekile ngenkonzo nezinsiza ezisezingeni eliphezulu."
I-Blossom Hotel Houston isanda kuklonyeliswa Ngendondo Yeqhawe Le-COVID yi-Asian Chamber of Commerce yase-Houston ngokuhlonishwa ngokusekela kwayo umphakathi wendawo phakathi nobhadane nesiphepho sasebusika ngasekuqaleni konyaka. Ihhotela liyajabula ukubizwa ngokuthi Ihhotela Elisemthethweni leqembu le-USA Table Tennis. Ngaphansi kwesivumelwano, imifaniswano Yeqembu Lethenisi Likazwelonke Lase-US izobonisa uphawu lwe-Blossom Hotel Houston.
I-Blossom Hotel Houston nayo ikujabulele ukumemezela ubudlelwano ne-Houston Astronomical Society ukuze isingathe uchungechunge lwemicimbi ebuka izinkanyezi ngesethi yokuqala ezoba ngoLwesine, Novemba 11 kusukela ngo-6:30 kuya ku-8:30 pm Umcimbi "WeLunar Evening", elivulekele izivakashi nomphakathi, lizokwenzeka endaweni yokubhukuda ephezu kophahla lwehhotela elinokubukwa okumangalisayo kwedolobha kanye nokufinyelela okungavinjelwe esibhakabhakeni ebusuku. Umcimbi wasekwindla uqalisa uchungechunge olusha emisebenzini nenhlangano engenzi nzuzo lapho imali enikelwe izozuzisa i-Houston Astronomical Society imizamo yokufinyelela umphakathi kanye nemfundo.
Kusukela endaweni yalo emaphakathi eduze ne-NRG Stadium, isifunda semnyuziyamu esidumile, izindawo zokuthenga, zokudlela nezokungcebeleka, ihhotela elisha lamukela izivakashi ukuze zithole izimpawu zalo zendawo ezijabulisayo ezizungezile futhi lizizwe livuselelwe futhi liqabulekile endaweni enezinsiza eziphambili, izihambi ezisezingeni lomhlaba, nenhle. yokudlela. Ukwengeza, njengehhotela eliwubukhazikhazi lodwa eliseduze nesikhungo sezokwelapha esikhulu kunazo zonke emhlabeni, ihhotela linikeza izivakashi umuzwa ophakeme wokwamukela izihambi kuyilapho zihambele izikhathi ezibalulekile nezinqubo.
Ihhotela elinezitezi ezingu-16, elizodlala indawo enkulu yalo kuvulwa ekuqaleni kuka-2022, inikeza amagumbi ezivakashi amahle angu-267 nama-suites kanye namamitha-skwele angaphezu kuka-9,000 wezindawo eziguquguqukayo zemihlangano nemicimbi. Isikhungo esisendaweni, sesimanjemanje sokuzilolonga esifakwe i-Peloton® sifinyeleleka ezivakashini amahora angu-24 ngosuku, kanye nesevisi yabasebenzi bezilimi eziningi ezohlangabezana nanoma yisiphi isicelo sesivakashi esinezinga lenkonzo yomuntu siqu elindelwe kusukela amahhotela e-boutique amahle kakhulu. Ihhotela liphinde libe nechibi elimangalisayo eliphezu kophahla kanye negumbi lokuphumula eliziqhenya ngokubuka okuhle kwedolobha lase-Houston.
Idizayini eyinkimbinkimbi yendawo ihlanganisa isitayela esicwengekile, esincane esinephalethi yombala ephefumulelwe inyanga enezibani ezikhanyayo, insada yemabula yeCarrera, uphahla lwethreyi oluhlukile, ukufakwa phansi kokhuni lolwandle kanye nokuthungwa okunethezeka kuyo yonke indawo. Amakamelo ezivakashi nama-suite anezindawo zokuhlala ezivulekile ezinokukhanya kwemvelo okuningi futhi afakwe i-Wi-Fi yamahhala, ama-Samsung Smart TV asezingeni eliphezulu, okomisa izinwele kwe-Dyson, abenzi bekhofi be-Nespresso, Amaphephandaba eDijithali ane-PressReader®, namagumbi okugeza emabula anemabula. ama-showerheads emvula kanye nezinsiza ezikhethekile ze-Aqua Di Parma™ ukuze kuhlangatshezwane futhi kudlule izidingo zebhizinisi, ezokuvakasha kanye nabahambi abagxile kwezokwelashwa.
Njengoba izidla ngaphezu kwamamitha-skwele angu-9,000 endawo yemihlangano kanye nemicimbi, i-Blossom Hotel Houston inezinga lendawo yemicimbi enemisebenzi eminingi enikelwe ezingqungqutheleni zebhizinisi zayo yonke imikhakha nezimboni ezahlukene kanye nemicimbi yomphakathi. I-Luna Ballroom ebabazekayo enamafasitela aphansi kuya kusilingi ifakwe amakhono e-audiovisual esimanjemanje ukuze yamukele kalula imihlangano nezinkomfa ezibonakalayo futhi ingajabulisa abantu abangafika kwabangama-250. Ihhotela linikeza ezinye izikhala zemicimbi eziyisishiyagalolunye ezinobuningi bokukhanya kwemvelo nezinhlelo zaphansi eziguquguqukayo. Emishadweni yesiginesha eklanywe ngobuciko bobuciko, i-Blossom Hotel Houston ihlanganisa izilungiselelo eziningi zemicimbi ekhethekile yabashadikazi.
Ekuqaleni kuka-2022, i-Blossom Hotel Houston ihlela ukunikeza izivakashi nabantu bendawo imiqondo emibili ehlukene yokudlela ngokubambisana nabapheki ababili abadumile abanezinkanyezi ze-Michelin. Lesi sakhiwo sizophinde sibe negumbi lokwamukela izivakashi elamukelekayo elizoba namamenyu okupheka neziphuzo aqondiswa abapheki, kanye negumbi lokudlela lezivakashi ezihlinzeka ngemali yokugibela yamazwe ngamazwe neyaseMelika. Imininingwane yezinhlelo zokupheka kanye nabapheki abalandela izindawo zokudlela izomenyezelwa maduze.
I-Blossom Hotel Houston itholakala ku-7118 Bertner Avenue e-Houston, eTexas. Ngokuhambisana nokuvulwa okuthambile, ihhotela lethula amaphromoshini eholide phakathi kwamanje no-Dis 31, 2021. Izivakashi zingabhuka amaphathi ezinkampani zamaholide kanye nemicimbi yokudlela eyimfihlo kusukela ku-USD95 ngomuntu ngamunye kuye phambili. Ukubhukha amakamelo kuyatholakala kusukela ku-USD289.00 kuye phambili okuhlanganisa nokupaka mahhala.
Ukuze uthole ukubhuka nolwazi oluthe xaxa nge-Blossom Hotel Houston, sicela uvakashele BlossomHouston.com.
Mayelana neBlossom Hotel Houston
I-Blossom Hotel Houston inikeza ulwazi olusha lwamazwe ngamazwe olugxile ekujuleni kwe-Space City. Ihhotela libeka izihambeli ngezinyathelo ezimbalwa nje ukusuka esikhungweni sezokwelapha esikhulu kunazo zonke emhlabeni kanye nezindawo zamabhizinisi ezisezingeni eliphezulu zase-Houston nezindawo zokuzijabulisa, futhi njengehhotela eliwubukhazikhazi eliseduze ne-NRG Stadium, liphinde liqhele ngamaminithi ukusuka ezindaweni ezikhangayo ezidumile zase-Houston. Kungakhathaliseki ukuthi zihambela izidingo zezokwelapha, ibhizinisi noma ukuzijabulisa, izihambeli zingajabulela ukuhlukahluka kwe-Houston, okuphinde kubonakale ekuvumeni ikhanda kwehhotela ezimpandeni ze-aerospace yedolobha, kuyilapho zithola ithuba lokuthenga okudayisa ehhotela, izindawo zokudlela ezimbili ezigxile kubapheki, izinsiza ezingenakuqhathaniswa. kanye nezinkonzo, amagumbi ezivakashi okunethezeka kanye nenani eliningi lemicimbi nezindawo zemihlangano. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, sicela uvakashele BlossomHouston.com, noma usilandele Facebook futhi Instagram.